Quraan (Holy Quran in Somali) App for iPhone - Free Download Quraan (Holy Quran in Somali) for iPad & iPhone at AppPure
Apps » Books » Quraan (Holy Quran in Somali)
Quraan (Holy Quran in Somali) Free Get
Quraan (Holy Quran in Somali) Description
Quraan Quraanka Kariimka (carabi: ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ; ingiriis: Koran) waa kitaabka Alle ﺍﻟﻠﻪ (s.w.t) ku soo dejiyay Nebi MaxamedMohamed peace be upon him.svg (n.n.k.h), kaas oo ku qoran luuqada carabiga. Kitaabka Quraanka wuxuu saldhig u yahay diinta Islamka dhamaanteed. Quraanka kariimka ah waa hadalka Ilaahay (ﺍﻟﻠﻪ) kaas oo malaga Jibriil u soo gudbin jirey Nebi MuxamedMohamed peace be upon him.svg (n.n.k.h) wakhti 23 sano ah, oo ku bilaabmaysa Diisembar 22keedii sanadkii 609 C.D (Ciise Dabadii), wakhtigaas oo nebigu ahaa 40 jir, ilaa markii taariikdhu ahayd 632 Ciise Dabadii, oo ku beegan sanadkii Nabi Maxamed Mohamed peace be upon him.svg (n.n.k.h) geeriyooday. Sidaa diinta Islaamku sheegtay kitaabka Quraanku waa midka ugu sareeya kitaabyada ee Ilaahay ka ilaalinayo khaladka iyo musuqmaasuqa isla markaana hogaan iyo hanuunin u ah dhamaan aadamaha ku nool dunida.
Ereyga quraan waxaa kitaabka Quraan laga dhex helaa 70 jeer, kuwaasi oo qaarkood yihiin ficil (verb) iyo magac (noun) ah qaraa (ﻗﺮﺃ) oo macnaheedu tahay "akhriyey" ama "la akhriyey".
Kitaabka Quraanka kariimka ah ee Ilaahay (s.w.t) ku soo dejiyay Nebi MuxamedMohamed peace be upon him.svg (n.n.k.h) waxaa lagu magacaabaa Al-Furqaan, kaasi oo ah tilmaamid ("al-huda"), xikmad, xasuusinta Alle ("al-dikhri"), iyo mid samada sare laga soo diray ("tanziil").